TSINGIN’I BEMARAHA : Mpizahatany voatafika, vazaha vavy iray voatifitra, lasan’ny jiolahy ny vola 600 euros
Miverina lasibatry ny asan-jiolahy indray ny distrikan’i Belo Amoron’i Tsiribihina ka ireo mpizahatany tonga mitsidika ny valan-javaboary Tsingin’i Bemaraha no tena mahita faisana amin’izany, raha ny tatitra voaray. 20 mai 2019
Mitombo isan’andro aman’alina ireo mpizaha tany niharan’ny fanendahana eny ambony lakana sy voasakan-dalana hany ka efa hita taratra fa nanomboka nihemotra niala ny tanàna izy ireo ary miha vitsy ny mpitsidika tonga noho ny tahotra. Ny 16 mey lasa teo, mpivady teratany vahiny frantsay indray no voatafika tamin’io fotoana io. Avy nandeha nitsidika izy ireo ary efa tany anaty fiara saingy tifitra vary raraka no nasetrin’ny mpandroba azy ireo. Vokany, vaky ny fitaratry ny fiara ka naratra mafy voatifitra teo amin’ny tanany ilay vazaha vavy. Voatery tsy maintsy nijanona izy ireo na niezaka nitsoaka ihany aza ny mpamily.
Manodidina ny dimy lahy ireo nanatanteraka ny asa ratsy niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Avy hatrany dia nalain’ireo mpandroba daholo ny entana sarobidin’ireto mpivady ireto niaraka tamin’ny vola mitentina 600 euros. Tafatsoaka moa ireto farany taorian’izay, ilay vazaha kosa nampidirina teny amin’ny CsbII manakaiky ny tanàna. Anisany mbola azo lazaina ho faritra mena tanteraka ankehitriny ity toerana mahafinaritra ity ary mbola tsy voavaha ny olan’ny tsy fandriam-pahalemana. Manao antso avo amin’ny mpitondra fanjakana araka izany ny vahoaka satria manapotika ny lazan’ny firenena Malagasy ny trangan-javatra tahaka izao rehefa tsy voafehy.